Istaatistikada Instagram Adigoon Shirkad Noqon ▷ ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Tirakoobka Instagram adiga oo aan shirkad noqon
February 23, 2019 0 comments 1143
Xilligii bulshada iyo teknoolojiyadda ayaa joogtay. Muddo sannado ah waxaa jiray shabakado badan oo bulshada la sii daayay. Adeegsadayaashani waxay ahayd inay awood u yeeshaan la xiriir saaxiibadaa goobta shaqada oo siyaabo kala duwan ula falgal. Daqiiqadihii ugu dambeeyay, barta Instagram waxay iska dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna isticmaalka adeegsada. Intaa waxa u dheer, iyagu waa a shirkado tiro badan Waxay bilaabeen inay adeegsadaan shabakadda la isku urursaday waxtarkooda. Taasi waa sababta isticmaaleya badan ay u doonayaan inay helaan tirakoobka Instagram iyaga oo aan noqon shirkad.
Inta badan raadinta ka dib shabakadda bulshada, ayaa isu meeleeyay sidii labaad ee adduunka oo dhan oo adeegsadayaal badan. Tan darteed, 600 waxay ahayd inay gaaraan malaayiin isticmaaleyaal firfircoon bil kasta, oo ku yaal meel ka hooseysa Facebook, oo ku jirta darajada. Goobta waa in ay u oggolaataa shakhsiyaadka dhaji sawirada iyo fiidiyowyada si aad u jeceshahay Sidoo kale waa inay awood u yeeshaan inay ku daraan sharaxaad daabacaadda, marka loo eego rabitaanka isticmaale. Intaa waxaa sii dheer, dalabka la xurmeeyay waa inuu la imaadaa liis ballaaran oo qalab ah si uu uga faa'iidaysto isticmaalegu inuu noqdo guul wadarta.
Qalabka kale ee maanta la isticmaalo badankood waa kuwa caan ah Sheekooyinka Instagram Iyada oo loo marayo ikhtiyaarkan ku habboon oo wax ku ool ah, adeegsadayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay daabacaan tiro aan dhammaad lahayn oo ah sawirro, gobollo iyo fiidyowyo. Sidan, shakhsiyaadka kale ee shabakadda waa inay awoodaan inay aragti ka muuqdaan, si kastaba ha noqotee, sheekooyinka shabakadda ayaa leh oo keliya Muddada saacadaha 24. Taasi micnaheedu waa, in ka dib marka uu dhaafo waqtigii loo cayimay, kuwa aan soo sheegnay ay lahaan doonaan is-baabi'in. U oggolow habkaan, iska ilaali inaad buux dhaafto muuqaalka shakhsiga su'aasha ku jira.
Badanaa shaqsiyaadku waxay rabaan inay ogaadaan sida ay wax yihiin hore uga sii soco shabakada Barta Instagram Iyaga ayay u tahay in tirakoobka Instagram la codsado iyada oo aan shirkad la lahayn; maadaama shakhsiyaadka dabiiciga ahi sidoo kale ay rabaan inay helaan. Iyaga ayagoo adeegsanaya, adeegsadayaashu waxay awoodi doonaan inay ogaadaan inta ay le'eg yihiin raacay kuwa raacsan iyo sida xiriirkoodu u horumarey. Sidoo kale, waad baran kartaa sida caanka ah ee sheekooyinkoodu u noqdeen iyo kuwooda sicirka hore ama gadaal madal
"aniga ii gusta”Instagram-ka si weyn ayaa looga yaqaan adduunka. Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo raba inay ogaadaan sida korodhka waxyaabaha jecel. Qaabkaan, waxaa loo qaadan karaa in sumcadda shaqsiyadeed ay awood leedahay. Horeba, in falcelinta kuwa raacsan ay tahay in loo tarjumo sida aqbalid iyo raynrayn adeegsadayaasha kale
Metricool ee loogu talagalay tirakoobka Instagram iyada oo aan shirkad laga noqon
Adeegsiga tirakoobka Instagram-ka gudaha ayaa mararka qaar noqon kara qalafsan oo xoogaa xadidan. Sidaa daraadeed, way fiicnaan laheyd shaqsiga inuu ogaado xogta laga soo qaatay dalab dibada ah. Tan darteed, dalabka Metricool wuxuu ku guuleystey inuu istaago aagga. Iyada oo loo marayo, adeegsadayaasha ayaa la kulmi kara tirakoob aad u wanaagsan Instagram la’aantiis shirkad
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a ikhtiyaar bilaash ah, halkaasoo shaqsiyan ay u noqon doonto inuu awood u yeesho inuu helo dhammaan tirakoobyada koontada isagoo si fudud u waafajinaya shan koonto oo ah shabakadaha bulshada, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram iyo Blog Intaas waxaa sii dheer, waa suurtagal in la kordhiyo isticmaalka arjiga iyadoo loo marayo Nooca PRO, kaas oo isku xiraya xisaabaadka 10 kala duwan.
Intaa waxaa sii dheer, boosteejada Metricool waxay si joogto ah u fiicnaaneysaa, si loogu daro shaqooyinka cusub oo ka dhigaysa xitaa mid soo jiidasho leh dadweynaha. Xitaa shabakadaha bulshada qaarkood waxaad leedahay ikhtiyaar isbarbardhigaya inta u dhexeysa koontada isticmaale iyo kan tartanka suuqa
Maxaa lagu sameeyaa Metricool?
Markii aad adeegsanayso codsiga Metricool si aad u ogaatid tirakoobka Instagram adigoon shirkad laheyn, waa inaad si muuqata u soo aragtaa muuqaalada xiisaha. Isku mid, waa inuu awood u yeeshaa inuu ka baxo waxyaabaha uu jecelyahay, soo saarista iyo aragtida sheekooyinka, sida loo kordhayo ama hoos loogu dhigo kuwa raacsan aaladda. Qalabkaan waxaa suurtagal u ah adeegsadaha inuu falanqeeyo, maareeyo iyo xitaa cabir waxtarka ee ka kooban daabacan. Sidaa darteed, interface-ka ayaa u oggolaanaya shakhsiga inuu ku sawiro bulshada, sheekooyinka iyo dhejinta ee ku jirta codsiga Instagram.
Metricool waxay kuu ogolaaneysaa inaad aragto isticmaaleyga garaafka halka koritaanka bulshada kuwa raacsan intii lagu jiray bilihii ugu dambeeyay. Si tan loo sameeyo, waa inaad muujisaa tirada dadka raacsan xisaabta, iyo sidoo kale tirada koontooyinka uu raaco shaqsiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato Tusmada lumay, daabacaadaha maalinlaha ah iyo wadarta guud ee toddobaadadii la soo dhaafay.
Markaad siineyso tirakoobka sheekooyinka laga soo qaatay Instagram, Codsiga Metricool wuxuu tusayaa Baaxadda, dareenka iyo tirada Wadarta sheekooyinka Instagram-ka ee la soo galiyay toddobaadkan. Intaa waxaa sii dheer, waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu qeexo nooca caynkee ah ee ay aad ugu habboon tahay in la hagaajiyo gaaritaankiisa Sida oo kale waxay ku wargelinayaan waa inay u muuqataa mid si faahfaahsan uga muuqata miis iyaga u abaabuli doona jinsiga, da'da, wadamada iyo meelaha dadka isticmaala ee arkay.
Waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha inuu ogaado Sidee loo daabacay daabacaadaada?. Si kale haddii loo dhigo, waa maxay gaarista ugu badan ee qoraalladaada maalinlaha ah ay helaan. Qaabkaas ayaa shaqsigu awood u yeelan doonaa inuu ogaado waxa ka doorbida iyo takoor dadka taas oo ah inaad diirada saarto xisaabtaada Instagram.
2 Tirakoobka Instagram
2.1 jecel yahay
3 Metricool ee loogu talagalay tirakoobka Instagram iyada oo aan shirkad laga noqon
4 Maxaa lagu sameeyaa Metricool?
Goorta aad ku dhajinayso Twitter Ha moogaabin!
Tirakoobka YouTube Baro sida loo haysto!